CBD FAQ Nataon'i RED EMPEROR CBD | STORE CBD ONLINE
CBD FAQ Nataon'i RED EMPEROR CBD | Vahaolana tsara indrindra amin'ny taona 2020
ZAVA-DEHIBE SY FANONTANIANA nataon'i RED EMPEROR CBD
Inona ny cannabidiol (CBD)?
Cannabidiol na CBD dia cannabinoid misy voajanahary ary iray amin'ireo mpiorina be indrindra amin'ny hemp. Ny CBD dia azo antoka hohanina ary tsy psychoactive. Noderaina hatramin'ny ela izy noho ny vokany mahasoa amin'ny fahasalamana nefa tsy misy ny voka-dratsy ateraky ny fanafody mahazatra.
Manana namana mipetraka any amin'ny fanjakana mbola rongony tsy ara-dalàna ve ny rongony? Aza avela hahazo lamandy sy fotoana an-tranomaizina ny namanao, mifoka zava-maniry, lazao azy ireo ny momba ny vokatra Delta 8 THC izay ara-dalàna federaly any amin'ny fanjakana 50!
Manandrana ny vokatrao amin'ny kalitao sy ny fiarovana ve ny ankolafy fahatelo anao?
Ie. Ny Emperora Mena CBD dia mirehareha amin'ny fananana fenitra avo indrindra momba ny fahadiovana, ny tanjaka ary ny kalitaon'ny vokariny. Ny Emperora Mena CBD dia andrana amin'ny antoko fahatelo momba ny fanoratana momba ny Cannabinoid, fitsapana ny famonoana bibikely, ny fizahana mikraoba ary ny famakafakana ny Terpenes
Avy aiza ny solika CBD anao?
Ny menaka CBD anay dia vita amin'ny hemp indostrialy fenitra voajanahary voajary tany California ary 100% tsy misy akora simika na artifisialy. Ny solika hemp avy amin'ny hemp indostrialy dia ara-dalàna alefa any Etazonia ankehitriny.
Hahatonga ahy hahatsapa ho "avo" ve ny vokatra CBD anao?
Tsia. Tsy hiaina fahatsapana "avo" ianao rehefa mihinana ny vokatra menaka CBD. Ny menaka CBD ampiasaina ao amin'ny Red Emperor CBD dia avy amin'ny zavamaniry hemp indostrialy, noho izany dia tsy hanome anao ny haavon'ny THC avo lenta.
Hahatonga ahy tsy hahomby amin'ny fitsapana zava-mahadomelina ve ny vokatra CBD anao?
Ny CBD dia heverina ho tsy azo jerena amin'ny fisavana ny rora na ny fisitrika. rehetra Emperora Mena CBD ny vokatra dia avy amin'ny zavamaniry hemp indostrialy ary mifanaraka amin'ny lalàna mifandraika amin'ny atiny tetrahydrocannabinol (THC) izy ireo.
Vakio bebe kokoa momba ny fitsapana CBD sy zava-mahadomelina.
Misy fiatraikany ratsy ve?
Red Emperor CBD Products azo antoka, tsy psychoactive, ary tsy misy fiantraikany ratsy.
Inona ny fitrandrahana CO2?
Ny Emperora Mena CBD dia mampiasa dingana fitrandrahana CO2 tsy misy simika izay mampiasa gazy karbonika voasedra mba hisintonana ireo fitambaran-toetra tiana (toa ny CBD sy ireo cannabinoid hafa) avy amin'ny zavamaniry. Ity dingana ity dia tsy misy solvents simika mahery setra izay matetika ampiasaina hanalana menaka CBD. Ny fitrandrahana CO2 dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy misy poizina. Na dia heverina ho fomba fitrandrahana zavamaniry lafo indrindra eto an-tany aza izy io dia heverina ho azo antoka indrindra ihany koa.
Ahoana no fomba handraisako ny CBD ary amin'ny doka inona?
Alohan'ny hampidirana menaka CBD amin'ny fombanao, toy ny fanampiana rehetra, alao antoka fa mijery amin'ny dokoteranao ianao sao azo antoka fa safidy mety ho anao io fanafody io. Zava-dehibe indrindra izany raha toa ka mihinana fanafody fanoherana ny fahirano ianao. Ny menaka CBD dia azo lanina amin'ny fomba maro samihafa: tincture, capsules, vaping oil, sublingual, na koa topical. Rehefa mandray CBD dia araho hatrany ny torolàlana momba ny fonosan'ny vokatra novidinao.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Spectrum feno, Broad Spectrum ary Zero THC CBD Products?
Manolotra politika fiverenana ve ianao?
Ie. Laharam-pahamehana ho anay ny fahafaham-ponao, ka izany no antony anohanan'ny garantien anao vola antoka 90 andro.
Azonao alefa any amin'ny fanjakana ve ny vokatra CBD Emperor Red?
Azontsika alefa any amin'ny fanjakana amerikana ny vokatra Red Emperor CBD, ankoatra an'i Kansas (KS), Arkansas (AR), ary Louisiana (LA). Tsy manana fandefasana iraisam-pirenena izao.